Lala Phantsi Kweenkwenkwezi
Xa iyi-476 Mbps, iqela lakho lonke lingafowuna ngevidiyo lize libukele iividiyo kwi-intanethi.
Ukuba ujonge ukuhlala ucocekile kwaye ukhululekile, le yindawo ekhanyayo ukuba uyonwabele. Umgangatho we-2 WONKE WONKE "I-MINI SUITE" ibandakanya i-BATHROOM YABUHLUNGU, IBHEDROOM, I-DEN & CAFE'. Indawo YEYAKHO YONKE kwaye ezongezelelweyo zininzi. Ikofu, iziselo ezibandayo, iziqhamo ezitsha, iyogathi, iOJ, kunye neesnacks zibandakanyiwe. NDIYINTLOMO yakudala "FULL SERVICE" SUPERHOST. Ndamkela zonke iindwendwe zam ngokobuqu kwaye ndibonelele ngolwazi oluxabisekileyo / iingcebiso eziluncedo ngexesha lokuhlala kwakho. Ndijonge phambili ekukhonzeni zonke iimfuno zakho zokuhamba
Ngokuthobela zonke izikhokelo nemigaqo ye-Airbnb, iindawo zokuhlala zicocwa kakuhle kwaye zibulawa iintsholongwane ngaphambi kokuba zihlale. Ukubambelela kucoceko oluphuculweyo kuya kuqinisekisa utyelelo olukhuselekileyo nolukhululekileyo. NDIGOVA NGOKUGQIBELELEYO kwaye ndizenzela yonke imisebenzi yokucoca ndedwa. NDIHLALA KWINQANABA ELIPHANSI lendawo yokuhlala kwaye ndiya kunceda xa kufuneka ;-) Phezulu, isilingi epeyintwe ngesandla eneeNkwenkwezi ezithandekayo ngasentla ziqaqambisa umxholo we-BEDROOM kule 120 yeminyaka ubudala yeVictorian Era charmer eyakhiwe ngo-1900. , iindawo zokuhlala ezicocekileyo zinekhaphethi entsha kunye nomgangatho, kunye nepeyinti entsha yepeyinti. Igumbi lokulala libonisa ibhedi engu-QUEEN SIZED kunye ne-14 "PILLOW TOP MATTRESS kunye nokutofotofo, amatsha kraca, amashiti akumgangatho ophezulu kunye neebhedi. Iitawuli ezitsha zehotele zihlaziywa kwaye zilungiswa. I-400mbps ULTRA HIGH SPEED WIFI iyafumaneka kuyo yonke indawo. Igumbi lokulala likwaxhotyiswe nge-HDMI yeTV eguquguqukayo ukudibanisa izixhobo zakho ukuze ujongwe.Igumbi le-USB PORT elikwigumbi jikelele liyakwazi ukutshaja ifowuni yakho, ithebhulethi, okanye ilaptop.I KEURIG COFFEE MAKER & FRIDGE entsha zikwiDEN kunye nezinto ezahlukeneyo. IZIPHUMO, IZIQHAMO EZINTSHA, IYOGURT, AMANZI, IPASTRIES & SNACKS ukuze uzonwabele. IDEN ine-futon couch etofotofo, i-recliner, kunye nebhentshi yokuphumla ngaphandle nje kwegumbi lokulala. I-HANDHELD SPRAYER kunye noxinzelelo oluhle lwamanzi.Ikwafakwe kwizinto ezininzi zangasese ezongezelelweyo kuzo zonke iintlobo ezibandakanya isomisi seenwele, i-toothbrush, i-toiletpastes, i-toilet paper epholileyo, i-Q-tips, i-razors, i-brush, i-creams yezandla, njl ... Umgangatho ophezulu, igama elithi OLAY WOMEN' Ukuhlamba umzimba S, i-NIVEA YAMADODA yokuhlamba umzimba, imivalo emitsha yesepha yomzimba ye-OLAY, isepha yobuso ye-NEUTROGENA, kunye ne-TRESEMME 'Shampoo & TRESEMME' Conditioner ziyanikezelwa. Ndongeze indawo entle ye-CAFE' phezu kwezinyuko ukuze uhlale kwaye wonwabele ikofu yasekuseni okanye ukukhangela ikhompyuter yakho. Ubungakanani obugcweleyo kunye neKITCHEN evulekileyo ikumgangatho wokuqala kwaye iyafumaneka kuzo zonke iindwendwe. Ibandakanya isitovu segesi, imicrowave, ioveni yetoaster, iimbiza/iipani kunye nezinto ezintsha zesilivere. IKHISHINI YINDAWO EKWABELWE NGAYO kunye noMmkeli-zindwendwe. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo malunga nokuzonwabisa, ukutya, imidlalo, okanye iminyhadala yenkcubeko/amathuba, ndingakunceda ndikukhokelela kwicala elifanelekileyo. NDIHLALA KWINQANABA ELIPHANTSI lendawo yokuhlala kwaye ndifana nefashoni yakudala "iFULL SERVICE STATION ATTENDANT", ndilungile, ndizimisele, kwaye ndiyakwazi ukunceda ngayo nantoni na endinokuyenza. Eso sesona sizathu sibalulekileyo esabangela ukuba ndiqalise ukuBukhaya kwa-Airbnb. Ndiyakonwabela ukunxulumana nabantu nokwenza abahlobo abatsha. Ndizama ngako konke okusemandleni ukwamkela zonke iindwendwe zam ngokobuqu kwaye ndibabone xa besiya kwindawo abaya kuyo elandelayo. Ndineencwadana ze-Buffalo-Niagara 2021 kunye nezikhokelo zokuhamba kwiindwendwe ukuze zifunde ngeziganeko zangoku kunye neminyhadala eqhubekayo ngexesha lokuhlala kwakho. Ukuba ngumhlali wobomi bonke kule ndawo, ndikwanayo ne-pulse entle kakhulu yazo zonke izinto ezenzekayo ngaphakathi nakwindawo ejikeleze le ndawo. Ipropathi ibiyelwe kwaye ikhanyiswe kakuhle kakhulu. Isibane sikhokelela ekunyukeni kwendlela eya kucango olusecaleni apho esinye isibane sokubona intshukumo siqaqambisa indlela yokungena. Indawo yangasemva kunye neveranda yangaphambili nayo iyafumaneka ukuze uphumle. Kwimeko enqabileyo yokuhlala umntu wesithathu, ndine-BRAND NEW QUEEN SIZED AIR MATTRESS & a fold out futon couch ekhoyo emhadini. Iindleko zomntu wesithathu ziya kuba yi-$ 20 / ubusuku kwaye ndiya kuthumela isicelo kwiziko leSigqibo kuwe. Ukuba ufuna isithuthi ukuya nokubuya kwisikhululo seenqwelomoya, isikhululo sebhasi, okanye kwindawo ethile, singalungisa izinto ngexabiso elithotyiweyo xa kuthelekiswa nokwabelana ngokukhwela ukuze ube ngcono ukuhlala kwakho...
AMANQAKU: *I-SUPERHOST ENCEDAYO *Igumbi lokuhlambela labucala *INDAWO YOKUPAKA ENGAPHANDLE KWESITALATO *INTSHA 14" IBHEDE YOMQHUMELO ENGAPHANSI YOMQHUMBE *IDEN YABUCALA *CAFE'
INKONELO EYONXELEKO = *IKOFU *AMANZI ABETHODLE *ISIQHAMO ESIHLALA *AMAQEMBU *IYOGURT *IKWENDI*AMANZI ESODA*JELLO/PUDDING
I-wifi ekhawulezayo – i-476 Mbps
4.98 out of 5 stars from 461 reviews
4.98 · Izimvo eziyi-461
IBlack Rock yindawo yakudala eyimbali yeBuffalo kumantla esixeko ezaliswe ziindawo ezintsha ezichulumancisayo. Ukufikelela kwi-iconic ye-Olmstead Park system inokufikelela ekupheleni kwesitrato sam kunye nendlela yokuhamba eya kwiMyuziyam yeMbali yaseBuffalo, i-Hoyt Lake / i-Marcy Casino, i-Albright Knox Art Gallery, i-Burchfield Penny Art Gallery kunye ne-HH Richardson Complex. IBuffalo Zoo ngaphakathi kweDelaware Park ebukekayo ikwiimayile ezimbini nje ezantsi esitratweni kwaye iibhlokhi ezimbalwa ukusuka apho yindawo eyaziwayo kaFrank Lloyd Wright kaDarwin Martin Complex. Umtya weHertel Ave, iLali yase-Elmwood kunye ne-Allentown yimizuzu nje embalwa kude. Kwikona nje ukusuka kwikhaya lam ungakonwabela umculo odlalayo kwindawo ebalaseleyo yaseBuffalo, iThe Sportsman's Tavern. Uvulo olukhulu lwe "Chandlerville" kubandakanya iThin Man Brewery kunye neTappo Pizza yokutyela yibhloko enye kunye nokuhamba ngokulula ukusuka ekhaya. Indawo entsha enomdla kwaye ekhulayo. Kukho into eninzi yokwenza "kwiSixeko sabamelwane abalungileyo" kwaye ndiyathemba ukuboleka isandla ekufumaneni ulonwabo oluhle. Ndinentliziyo entle ngokuqhubekayo edolophini kwaye ndinokuba luncedo ngamaxesha onke...
Ndiphuma kusapho olunothando, olusondeleleneyo lwabantwana abali-10 kwaye ndinolwazi oluhle ngenyani ngokuqhubekayo kwingingqi yaseBuffalo-Niagara. Ndihlala ndedwa kwaye ndedwa kwinqanaba elisezantsi lendawo yokuhlala kwaye ndinokufumaneka ngokulula kuzo zonke iimfuno zakho. Andifuni nto ingcono kunokuba ndikuncede ekufumaneni ukutya okulungileyo kunye nokuzonwabisa okanye nayiphi na enye into oyifunayo ngexesha lokuhlala kwakho. Ndiyazi i-BUFFALO-NIAGARA ngaphakathi nangaphandle kwaye ndonwabela ukubonisa indlela endizingca ngayo ngedolophu yakowethu. Ndingumntu othanda imidlalo kwaye ndiyakonwabela ukugxila kwiBhili yam yeBuffalo, iNotre Dame Fighting Irish & NY Yankees ngaphezulu kwezinye. Ngexesha lomsebenzi wam njengomthengisi othengisa isiselo esingaphaya kwendlela kunye nomphathi weakhawunti yentengiso, ndiye ndafikelela kuyo yonke indawo ejikeleze idolophu kwaye ndinokwazisa ukuba ungaya phi kwaye ufike njani apho. Ndivulelekile ekuncedeni ngeemfuno zakho zokuhamba xa ishedyuli yam ivuma kwaye ngexabiso elithotyiweyo leenkonzo zokwabelana ngokukhwela. Ukubeka nje ngokulula, ndilapha ukwenza utyelelo lwakho lube lololonwabo kwaye ndiya kuthembisa ukunika umzamo wam wokwenza oko...
Ndiphuma kusapho olunothando, olusondeleleneyo lwabantwana abali-10 kwaye ndinolwazi oluhle ngenyani ngokuqhubekayo kwingingqi yaseBuffalo-Niagara. Ndihlala ndedwa kwaye ndedwa kwi…
Inombolo yomthetho: STR20-10043156
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Buffalo